FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BO-JACK - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bo-Jack
Alika mifangaro Boston Terrier / Jack Russell mifangaro
'Ny alikako dia fiampitana eo anelanelan'ny Boston Terrier sy Jack Russell Terrier. Izy dia be fitiavana sy tsara fanahy angovo taonina . Tena marani-tsaina koa izy. Sahabo ho 20 pounds eo ho eo izy. Mila fanatanjahan-tena be dia be izy. Alika fonenana tsara izy. Manana palitao boribory tsara tarehy misy fehiloha sy tarehy fotsy izy, mitovy amin'ny havany any Boston Terrier. Afaka mitsambikina avo dia avo izy. Tia fiofanana mailaka. Alika mahia kely izy, tsy misy olana amin'ny lanjany. Manana palitao fohy fohy manjelanjelatra izy ary kely kely ny rantsany. Tsy alika maimbo mihitsy izy. Ny olona tonga dia milaza fa tsy fofona alika mahazatra akory izy. Tena tsara bika sy hozatra izy. '
Ny Alika Bo-Jack dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Boston Terrier ary ny Jack Russell Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Izaho dia niteraka an'i Boston Terrier (lahy) sy Jack Russell (vehivavy). Manana zanak'alika kely 7 naseho teto izahay tamin'ny herinandro 1. Bo-Jacks no iantsoantsika azy ireo. Izy ireo dia tena alika kely. Antsoiko izy ireo fa fifangaroana tsy manam-paharoa an'ny Jack Russell (vehivavy) sy ny Boston Terrier (lahy). Ny lahy any Boston no habe lehibe kokoa ao Boston. Ireo alika kely rehetra ireo dia brindle sy fotsy. Ny marika fotsy dia toy ny an'ny Boston. Tsy miseho tsara amin'ity sary ity i Brindle. Heveriko fa rehefa mihalehibe izy ireo dia hampiseho azy tsara kokoa ilay sary. ' Sary natolotry ny D & D's Kennel, Debbie Snyder ary Doug Smoot, tompona
inona no havanese alika voaharo
Alika kely kely teratany Boston Terrier / Jack Russell Terrier (Bo-Jacks) aseho eto amin'ny 1 herinandro, sary natolotry ny D & D's Kennel, Debbie Snyder ary Doug Smoot, tompona
Alahady kely alika kely i Ter Terre / Jack Russell Terrier (Bo-Jack), Sary natolotry ny Kennel an'i D & D, Debbie Snyder ary Doug Smoot, tompona
Alika kely Bo-Jack amin'ny 2 1/2 herinandro - i Jack Russell no reniny ary i Boston Terrier ny rainy. Sary natolotry ny D & D's Kennel
'Ireto misy sary nalaiko tamin'ny zanakay mifangaro Jack Russell / Boston Terrier, Jazmin tamin'izy 3 volana. Izy no mifangaro tanteraka amin'ny karazany roa. Tiany ny mihazakazaka, mihazakazaka, mihazakazaka ary milalao miaraka amin'ny zanatsika ary rehefa vita izy dia tiany ny mifampikasoka amin'izay olona manana valahany hiondrika. Tiany ny manakaiky ny olony. Tsy lasa lavitra mihitsy izy. Tena mahafatifaty izy. '
Jazmin ilay alika kely Bo-Jack, 3 volana miaraka aminy kilalao pacifier .
'Ity no fangaro Jack Russell sy Boston Terrier nantsoina hoe Belle raha mbola teo am-pilalaovana ilay filasiana zanaky ny zana-drahalahiko aho. Tamin'izany fotoana izany dia teo an-tampon'ny slide izy. Mavitrika tokoa izy nefa koa mandany fotoana hatoriana ary tiany ny mijery ny sasany TV fampisehoana. Belle dia tsy alika mora nampiofanina ary raha ny marina dia mbola eo am-panandramana haka azy izy fanjonoana, fitrandrahana ary toetra hafa mahaliana hafa voafehy izy. Miara-manao izany isika, saingy manana ny sainy manokana izy. 1 1/2 taona amin'ity sary ity izy, tia kilalao marokoroko indrindra ary milalao trondro, mitsambikina eo am-pofoako raha mbola eo amin'ny KAJIMIRINDRA ary afaka mianiana aho raha manana ankihiben-tànana izy miasa ny solosaina. Belle dia manan-tsaina nefa afaka mafy loha ... fa izy tia ho tiavina ary omeo fitiavana fa vonona aho amin'izany! '
'Ity ny alikako Molly Moo amin'ny 4 taona. Ny reniny dia Boston Terrier ary ny rainy dia Jack Russell Terrier. Nahazo azy izahay rehefa feno herintaona izy tamin'ny namana iray mipetraka amin'ny toeram-piompiana. Ny sakaizantsika Jack Russell dia 'nampiala-tanana' an'i Boston Terrier mpifanila vodirindrina aminy ary rehefa nivoaka ny fako dia nahatsiaro tena ho meloka ny namako ka naka iray tamin'ireo zanak'alika izy. Raha ny zava-nisy (ho tombontsoantsika), niafara tamin'ny tsy fahafahany mitazona azy any amin'ny toeram-pamboleny izy ireo satria nandavaka hatrany ambanin'ny fefy akoho ary mamono akoho . Vao tsy ela akory izay dia maty ny alikan'ny vadiko ka nanontany anay ilay namany raha mila alika hafa izahay. '
'Nanomboka teo ny fifankatiavana teo amin'ny vadiko sy Molly. Alika mahafinaritra izy ary tena tia sy be fandavan-tena. Ny kilalao ankafiziny dia tady mifatotra izay soloiko isam-bolana noho ny fahasimbany. Tsy maintsy mividy ny tady izay ho an'ny alika 150-kilao aho (Molly dia 28 kilao) satria raha kely kokoa noho io izy dia hovonoiny ao anatin'ny 2 andro. Molly mankahala ny orana ary zara raha zaka ny lanezy. Toy ny saka izy satria hitady sunbeam ao an-trano ary handry mandritra ny ora maro. Ny fialam-boly tiany indrindra dia ny mipetraka eo an-tsoratry ny seza ary mizaha eo am-baravarana ambadiky ny varavarankely na eo am-baravarankely. Mijery am-pitiavana fatratra izy isaky ny misy fiara, olona na biby tonga ao amin'ny faritra ijereny azy. Izy dia ho tsara toy ny alika polisy amin'ny tsatokazo. Nanana olana mole nahatsiravina tao an-tokotaninay izahay mandra-pahatonga an'i Molly. Mahomby tokoa izy amin'ny fisamborana moka ka tian'ny namako hanofa azy mandritra ny andro, mba hahafahany manadio ny tokotaniny koa. '
'Molly dia lapdog be indrindra eo am-pijerena fahitalavitra amin'ny takariva ary ny toerana fatoriana tiany dia mivelatra eo anelanelantsika roa toy ny hoe izy ilay alika mafana ary izahay no bun. Izy io dia manana karazana purr izay ataony rehefa manosotra azy ianao ary tena afa-po izy. '
'Somary manaikitra eo ambanin'ny manaikitra izy, ka matetika no miseho ny vanginy roa ambany. Tiany ny mandehana an-tongotra ary mandehana mitaingina fiara. Miezaka mandeha miaraka aminy imbetsaka isan-kerinandro aho. Na eo aza ny fitomboany dia alika milamina tokoa izy ary tsy dia mivily. Nefa rehefa avy niasa izy dia tandremo, satria tena zava-dehibe aminy ny lalao. Matetika amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka maka ny kilalaon-tady izy mba hahafahany maka ny herisetra nataony tamin'io . I Molly dia alika mahafinaritra fotsiny ary tsy azoko an-tsaina hoe tsy manana azy ao amin'ny fianakavianay izy. '
Molly Moo the Bo-Jack amin'ny faha-4 taonany
Jack Russell miharo pitbull
fetra collie sy heeler mix
puppy pei volamena amidy